Costa Rica: Niresaka ny telegrama Wikileaks ireo mpiserasera · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Jenny Cascante Gonzalez
Voadika ny 23 Marsa 2011 4:30 GMT
Volana maromaro izay no efa nodiavina raha natobak'i Wikileaks tamin'ny fahalalam-baovao ireo telegrama diplomatika ahitana votoaty politika sy sosialin'ny firenana maro manerana ny tany. Ny gazety La Nación [es] an'ny Costa Rica no gazety avy ao Amerika afovoany voalohany nandray ny telegrama –avy ao amin'ny masoivoho Etazonia ao Costa Rica ny ankamaroany– mivantana avy amin'ny WikiLeaks. Niteraka adihevitra lehibe ny votoatin'ireo telegrama tao amin'ny bilaogy sy valan-tserasera KostaRikana; samihafa araka ny isan'ny lohahevitra voambara ao @ telegrama ny hevitra mipoitra.
Cristian Cambronero avy amin'ny Fusil de Chispas [es] no nanasongadina ny zavabitan'ny gazety nomerika:
Mahasodòka amin'ny endrika sy fomba maro ny WikiLeaks. Saingy misy zavatra iray mampiavaka azy tena tiako: ny fampivainganana ny mety ho vitan'ny teknolojia sy ny fifandraisana ankehitriny, ka hatramin'ny olo-tsotra sy izay mandray andraikitra dia manana fiantraikany hatramin'ny ambaratonga tsy noeritreretina akory ny zavatra ataony.
Adriana Naranjo izay manoratra ao amin'ny Revista Amauta [es]:
Tsy dia tena nahafaly loatra ny fanamarinana ny zavatra efa fantatray ny nivoahan'ny telegrama tamin'ity herinandro ity, fa fahaterezana lalina tamin'ny filazana/tsy nisy filazana avy amin'ny olona, ny fikambanana sivily, ireo antoko mpanohitra politika … momba ny firenena tsy miraika sy kanosa izay toa mendrika hanihaniana ny kilasy politika( eto amin'ny firenena sy iraisampirenena) .
Dean Cornito, ao amin'ny bilaoginy La Suiza Centroamericana [es], niteny:
Mety misy vaovao mahaliana ny telegrama diplaomatika, fa izay hitanay kosa ankehitriny, dia fosafosa dilpomatika sy zavatra tsy misy dikany mety hiteraka fahagagana na fahatezerana ho anay.
Xinia Ch indray dia namoaka ny fehin'izay lohahevitra ankapobeny hita tao amin'ny telegrama tamin'ny bilaoginy Con derecho al abucheo [es]. Nofeheziny fa,
Na dia manamafy “izay efa fantatsika” aza ny telegrama na dia mampiasa ny zo fototra ananantsika aza isika hitsikera sy “hanivaiva”, dia zava-dehibe ihany koa indraindray ny mandrafitra fehinteny amin'izay tadiavintsika na tsia rahampitso, indrindra raha resahina ny momba ny mpitarika politika vaovao.
Nilaza i Julio Córdoba fa mariky ny fangaraharahana ny famoahany ny telegrama ao amin'ny bilaoginy Ciencia Ficción:
Ny telegrama izay zarain'ny Wikileaks amin'izao tontolo izao dia mampiseho ny fomba ijeren'i Etazonia ny tombotsoany (satria tsy misy firenena manana namana na fahavalo). Tsy tahaka izay mihevitra ho zava-dratsy ny famoahana ny zavatra tahaka itony, mino aho fa tsy misy firenena tokony hanana tsiambaratelo noho ny antony iray: an'ny vahoaka ny tsiambaratelo.
Vokatry ny famoahana ny telegrama, sy ny ezaka hitazomana ny fangaraharahana sy ny fikasana mba ho tonga any amin'ireo mpamaky maro ny votoati-kevitra voalaza, nampiasa tranonkala ny fikambanana KostaRikana[es] handika ny telegrama ho amin'ny teny espagnola. Izany no tena mandrisika azy ireo:
Fa maninona no adika? Fampiasana ny mangarahara ny telegrama navoakan'ny Wikileaks . Fampitandremana ho antsika ny fivoahana telegrama sahala amin'itony fa mety hisy fiantraikany amin'ny fanapaha-kevitry ny firenena ny fitsabatsabahan'ny fitondrana vahiny. Fampiasana ny demokrasia sy fiarovana ny fiandrianampirenena ny fandikana ny telegrama ho amin'ny teny hay. Mba izarana amin'ny tenimpirenentsika ny vaovao azon'ny Wikileaks ho fampiharana ny zontsika hahazo vaovao sy ho tahirin-kevitry ny tantara.
Ao amin'nyTwitter, ireto ny resadresaka sy karaza-kevitra azo arahiana amin'ny alalàn'ny fitadiavana tenifototra #Wikileakscr [es].